पार्टीले जिम्मेवारी हेरफेर गर्नेबारे कुनै निर्णय गरेको छैन : डा. भीम रावल – Sodhpatra
पार्टीले जिम्मेवारी हेरफेर गर्नेबारे कुनै निर्णय गरेको छैन : डा. भीम रावल
प्रकाशित : ३१ भाद्र २०७८, बिहीबार १९:४४ September 16, 2021
धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज को हो भन्ने विवादको विषय बाहिर आइरहेका बेला नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले पार्टीमा जिम्मेवारी हेरफेर गर्नेबारे कुनै निर्णय नभएको बताएका छन् ।
गृहजिल्ला अछाममा एमालेले आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उपाध्यक्ष रावलले भने, ‘पार्टीले जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने कुनै निर्णय गरेको छैन। कार्यदल गठन भएको छ, सहजकर्ता तोकिएको छ। बालकोटमा भएको छलफलमा मेरै प्रस्तावमा भएको हो,’ उनले भने, ‘त्यहाँ पार्टी अध्यक्षले तपाई पार्टी उपाध्यक्षको हैसितमा हुनुहुन्छ। दश बुँदे कार्यान्वयन गर्ने विषयमा जहाँ समस्या आउँछ त्यहाँ छलफल गरौंला भन्नुभएको हो।’
उनले आफ्नै प्रस्तावमा बालकोटमा नेताहरु सबै बसेर छलफल गरेको भन्दै कुनै समस्या अहिले नदेखिएको बताए। ‘म गृहक्षेत्र आएलगत्तै धेरैले सोधेपछि मैले प्रष्ट पार्न खोजेको हुँ,’ उनले भने,‘बालकोटमा भएको छलफलमा को इन्चार्ज के भन्ने विषयमा कुनै छलफल भएको होइन । पार्टीलाई एकताबद्व बनाएर लैजाने समय हो यो।’
कम्युनिस्ट पार्टीमा जीवन बलिदान गर्न तयार रहेको भन्दै आफूहरु लागेको भन्दै पदका लागि लडाइ नभएको बताए। एकीकृत समाजवादीमा लागेका नेताहरूको नाम नलिएरै रावलले प्रलोभन देखाउन खोज्लान् भन्दै सचेत हुन नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गरे।